Rooble ma wuxuu dhagax dhigay meeshii uu horay u dhagax dhigay Kheyre? | Caroog News
Rooble ma wuxuu dhagax dhigay meeshii uu horay u dhagax dhigay Kheyre?
Xarunta Gurmadka Qaran oo bishii October ee sanadkii lasoo dhaafay uu dhagax dhigay Ra’iisul Wasaarihii hore ee Soomaaliya Xasan Cali Khere ayaa sida muuqata waxaa mar kale dhagax dhigay Ra’iisul Wasaare Maxamed Xuseen Rooble.
Wasiirka Gargaarka ee dowladda Soomaaliya Xamza Saciid Xamza ayaa labada Ra’uusil wasaare ku wehlinayay howshaas. Ma jiro wax war ah oo xukuumadda federaalka ay ku caddeyneysay sababta labo sano oo isku xigta loo dhagax dhigay hal xarun.
13-kii bishii October ee sanadkii 2019-kii ayuu Kheyre ka qeyb galay munaasabad lagu billaabayay dhismaha xaruntaas, oo uu sheegay abuuriddeeda ay ku timid baahi weyn oo loo qabay.
“In xaruntan la dhagax dhigo waxay ka dhalatay dhacdo xanuun badan oo ay u gurmadeen dhammaan shacabka Soomaaliyeed, wiilal iyo gabdho isxilqaamay oo halkan ku shaqeeyay markii ay nagu dhacday dhacdadii 14-ka October, warbixintii ay la wadaageen xukuumadda ayaa waxay ahayd in la dhiso xarun gurmad qaran oo mustaqbalka umadda loogu adeego.” Erayadaas ayaa ka mid ahaa khudbaddii uu Ra’iisul Wasaarihii hore, Xasan Cali Kheyre ka jeediyay munaasabaddaas.
Bogga rasmiga ah ee xafiiska Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya uu ku leeyahay Facebook-ga ayaa lasoo galiyay muuqaal laga soo duubay dhagaxdhigga Xarunta Gurmadka Qaran.
Laakiin 14-kii bishan October, oo ku beegneyd Arbacadii, kuna aaddaneyn sanad guuradii saddexaad ee kasoo wareegtay musiibadii ka dhalatay qarixii isgoyska Soobe, ayuu mar kale Ra’iisul Wasaaraha hadda xilka haya ee Soomaaliya dhagax dhigay isla Xaruntii Gurmadka Qaranka.
Muuqaal lasoo galiyay bogga Telefishinka Qaranka Soomaaliyeed ayaa lagu soo bandhigay munaasabadda dhagax dhigga, lamana sharrixin sababta ka dambeysa arrintan.
Wali ma cadda in xaruntani ay tahay mid labaad oo loogu talagalay howlaha gurmadka iyo in kale.
“Annagoo ka jawaabeyna waxyaabihii aan kula soo kulannay meelihii aan tagnay ee ay ka mid ahaayeen Wasaaradda Caafimaadka, xarumaheeda isbitaallada ah ee Martiini iyo Banaadir iyo sidoo kale ducadii loo sameeyay dadkuu ku dhintay qarixii Soobe, oo kor u dhaafayay 500 oo ruux, waxaa noo soo baxday in la sameeyo xarunta howlgallada degdegga ah ee qaranka, oo ka hortagta iskuna diyaarisa musiibooyinka si ay ugu jawaabto oo ay xal ugu hesho.” Ayuu yidhi Ra’iisul Wasaare Rooble oo ka hadlayay munaasabadda dhagax dhigga.
Qarxiii Soobe, oo sababay in la aasaaso Xarunta Gurmadka Qaranka ayey ku dhinteen dad kor u dhaafayay 600 oo ruux, oo dhammaantood rayid ahaa.
Ilaa hadda ma jirto cid sheegatay mas’uuliyadda weerarkaas oo noqday kii ugu dhimashada badnaa ee abid ka dhacay Soomaaliya, inkastoo dowladda Soomaaliya ay mas’uuliyaddiisa dusha uga tuurtay kooxda Al-Shabaab.